Mahadsanid! | Martech Zone
Wax badan ayaan hayaa inaan uga mahadceliyo mahadnaqan children carruur caafimaad qabta oo aan caadi ahayn, saaxiibo fiican, iyo a shaqo riyadeed. Wixii ku saabsan qoraalkayga, qofka aan aad ugu mahad celiyo waa adiga! Halkan waxaa ku yaal liistada faallooyinka ku jira boggeyga (sida tirada faallooyinka!). Kaqeybgalkaaga balooggan ayaa ah xoogga dhaqaajiya tayada tayada waxyaabaha aan isku dayayo inaan halkaan dhigo maalinba maalinta ka dambeysa.
Haddii aad la yaabban tahay sida aan tan ku sameeyay, waxaan ku orday bayaankan SQL ee soo socda ee ka dhanka ah keydkeyga wordpress:
XUL XULASHO ('> li >> a href = "', 'comment_author_url`,'"> ', `` comment_author`,'> / a >> li> ') KA' 'wp_comments` HALKII' comment_approved` = 1 IYO comment_author_url> > '' IYO 'comment_author >>'Douglas Karr'IYO' comment_type = '' GROUP BY 'comment_author`,' comment_author_email 'AMARKA TIRADA (' comment_ID`) DESC
Tags: 2008ade olonohbloke blogalwaax Brandoncommentsdeyn taplinbunni duanesomaliaJDugaadhsade juliemartin weissmike schinkelmodifoonick halsteadkool koolipatch welchsuuqgeynta ganacsiga yaryarSterling camdensteven hodsontechzqodaxtoni chungwilliam tully
Dhibaatada Qabyaalada… er… Widgets
Guul iyada oo loo marayo Warbixinnada Isticmaalka Iswada
Nov 27, 2008 saacadu markay tahay 3:45 PM
Waad ku mahadsan tahay Douglas bartaada weyn! Thanksgiving faraxsan!
Nov 27, 2008 saacadu markay tahay 9:15 PM
Mahadsanid! Dhamaanteen waan ku raaxeynaa oo wax ka baranaa bartaada. Jacaylka xiriiriyaha ayaa fiicnaa, sidoo kale.
Nov 27, 2008 saacadu markay tahay 10:53 PM
Nov 27, 2008 saacadu markay tahay 11:53 PM
Waad ku mahadsan tahay nin xusid 🙂
Kuma lihin mahadnaq halkan UK laakiin… Mahadnaq Wanaagsan 🙂
Nov 28, 2008 at 12: 34 AM
Thanx Douglas si uu noo xusuusto oo uu halkan ugu xuso maalintan Mahadcelinta.
Nov 28, 2008 at 12: 36 AM
Mahadsanidin. Mahadnaq sheegidaada.
Nov 28, 2008 at 12: 49 AM
Waad ku mahadsantahay inaad haysato waxyaabo aad u fiican.
Sidee ku abuurtay liiskan? Waxaan jeclaan lahaa inaan wax la mid ah ku sameeyo balooggeyga.
Nov 28, 2008 at 2: 04 AM
Amigo! Waad ku mahadsan tahay qaylada. Waxaan u maleynayaa in beel yar ay meel fog gaari karto. Mar kale ayaan istaagi doonaa.
Nov 28, 2008 at 2: 26 AM
Waad ku mahadsan tahay sidoo kale ninka xuska .. Waxaan rajeynayaa inaad heysato mahadnaq aad u fiican.
Nov 28, 2008 at 7: 36 AM
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kala shaandheyso liiska URL-yada 🙂 Waxay umuuqataa inaan ahay shakhsiyad kala qaybsan…
Nov 28, 2008 at 9: 50 AM
khiyaano fiican ~ mahadsanid xusid
Nov 28, 2008 at 10: 19 AM
Waad ku mahadsan tahay sheegista Doug. Aniguna waxaan ku dhaaranayaa inaanan kaliya dhahayn tan si aan ugu kordhiyo tiradayda faallooyinka 1 🙂
Nov 28, 2008 at 11: 14 AM
Waan la dhacay. Qoraalkani waa inuu qaatay waqti dheer in la sameeyo!
Nov 28, 2008 at 11: 39 AM
Mahadsanid! Thanksgiving faraxsan!
Nov 28, 2008 at 11: 01 AM
Waxaad tahay qof naxariis badan. Waad ku mahadsan tahay noqoshadaada Doug. Waadna ku mahadsan tahay wax badan oo aad na bartay.
Nov 28, 2008 saacadu markay tahay 1:27 PM
Waad ku mahadsan tahay sheegista! Waxaan sameeyay wax sidan oo kale ah bilo kahor (markii xannibkaygu gaadhay in ka badan 2000 faallooyin). Had iyo jeer wanaagsan inaad jacaylka dib u siiso.
Nov 28, 2008 saacadu markay tahay 8:07 PM
Waad ku mahadsan tahay mahadsanid, Doug. Sii wad hawsha wanaagsan!
Nov 28, 2008 saacadu markay tahay 9:18 PM
Aad baad u soo dhaweyneysaa!
Waxaan la yaabanahay haddii labadayda qoraal la isku daray haddii aan liiska sare ka gali lahaa…
Nov 29, 2008 at 6: 22 AM
Tani waa liistada weyn ee faallooyinka. Weligay ma arag qof ku dhejinaya jacaylka isku xidhka dhammaan faallooyinkooda. Xaqiiqdii, tani waa mid ka mid boostada mahadnaq ee weyn ee aan maanta akhriyay.
Nov 29, 2008 at 10: 03 AM
Waaw taasi waa mahadsanid badan !!
Mahadsanid Mahadsanid, Doug.
Nov 30, 2008 at 12: 26 AM
Mahadcelin farxad leh waadna ku mahadsan tahay adiga!
Nov 30, 2008 at 3: 17 AM
Waxay igu noqotay layaab fiican inaad dib ugu soo laabato shaashadayda. SQL maahan madadaalo?
Adigana mahadsanidin. Waxaan halkan ku hayney curashadeena halkan Kanada bishii hore.
Nov 30, 2008 saacadu markay tahay 10:28 PM
Hi Doug, baloog aad u fiican oo aad halkan ku leedahay, ma aanan arkin magacayga laakiin waxaan haystay xiriiriye sheegaya in uu jiro xiriir markaa waan kaaga mahadcelinayaa xiriirka jacaylka. Adigana mahadsanidin!
Nov 30, 2008 saacadu markay tahay 11:16 PM
Waad ku mahadsan tahay sheegista Doug. Waan ku faraxsanahay inaan arko dad badan oo soo qaadanaya fikradda "SEO for Xmas"!
1, 2008 at 9: 54 AM
Doug, waxaan rajaynayaa inaad mahadnaq aad u wanaagsan heshay! Waad ku mahadsantahay wadaagista iyo xikmada aad bixiso. Akhriskaagu ha kordhiyo xitaa intaa!
1, 2008 at 10: 12 AM
Waad ku mahadsantahay isku xirka Anigu waxaan ahay soo saare softiweer laakiin suuqgeyntu aniga daruuriga ayey ii tahay astaynta shaqsiyeed, iwm .. 🙂
1, 2008 at 11: 30 AM
Waad ku mahadsantahay iskuxirka Doug, mudo ayey ahayd markii uusan arkin baloogaga, waxaan kahelayaa iskuxirka dashboodkeyga, waana layaabay maxaa yeelay waxaan layaabay sida aad uqori kartid dhamaan dadka wax faaleeya… Laakiin hada waan ogahay sida loo sameeyo! 😀
Waxaan ka akhriyay ur blog ka Google Reader, mar kale waad ku mahadsan tahay maqaalladaadii weynaa.
1, 2008 at 12: 09 PM
Waad ku mahadsantahay iskuxirka 🙂
2, 2008 at 12: 40 AM
Waad ku mahadsantahay iskuxirka, waadna ku mahadsantahay aragtida weyn ee aad halkaan ka siisay iyadoo naga caawineysa baloog-qorayaal cusub oo ruug cadaa ah inaan ka helno dariiqadan aan ugu yeerno shabakadda.
2, 2008 at 4: 19 AM
Waad ku mahadsantahay Link Doug. Thanks mahadsanid
2, 2008 at 9: 10 PM
Wax badan baa waajib ah, mudane wanaagsan.
Doug, waad ku mahadsan tahay xusuusintaada boostada mahadnaqa. Runtii waxay ahayd qoraal gaar ah, markii aan dareemayna iskuxiraha dashboodkayga WordPress, waxay iguqabsatay si kadis ah.
Sii wad shaqada weyn, iyo sidoo kale inaad aragti sare ku soo qaadatid bartaada.
Dhammaad dhammaystir u ah sannadka 2008 oo laga yaabaa inay 2009 kaa sii ducayso xitaa in ka sii badan oo aad ku mahadsan tahay sannad ka dib.
3, 2008 at 9: 52 PM
Aad baad ugu mahadsantahay xiriirka! 🙂
4, 2008 at 7: 33 AM
Waad ku mahadsantahay inaad ku dartay barta barteyda http://www.lancecorner.com.
Runtii waan jeclahay aqrinta qoraaladaada blogka 🙂
Sii wad shaqooyinka wanaagsan!
7, 2008 at 10: 17 AM
Mahadsanid Douglas! Thanksgiving faraxsan! 😀
12, 2008 at 12: 58 AM
Haye Doug !!
Waad ku mahadsan tahay sheegista !! Taasi waa runtii adiga macaan !! Mahadsanid run ah 🙂
12, 2008 at 4: 14 PM
Waxay ahayd mid aad looga fekeray inaad dib ugu celiso saaxiibadaa goobtaada iyo booqdayaasha qaabkan lama filaanka ah. Waan ku raaxeystaa waxyaabaha ku jira balooggaaga, in kasta oo aan in muddo ah ka maqnaa wareegga booqashada. Ficilkaagii nasiib-darrada ahaa ee naxariis-darrada bina-aadamnimada ee aad ku muujineysay isku-xirka dashboodkayga gadaashiisa wuxuu ii keenay "baahi wareer diirran" oo aad loogu baahan yahay iyo dhoolla caddeyn.
Blog-gaagu waa ilaaliye! Mar labaad, runtii waan ku qanacsanahay. Sii wadida barakooyinka iyo koritaanka dhamaan dadaalkaaga.
Apr 22, 2009 at 7: 52 AM
Aad baad ugu mahadsantahay xiriirka
May 10, 2009 at 11: 41 PM
Wax yar baa soo daahay, laakiin waad ku mahadsan tahay magacayga aad sheegtay! Waad weyntahay, Doug. 🙂
Jun 5, 2009 at 10: 02 PM
Waad ku mahadsantahay iskuxirka